Cambodia: Mitohy ny fanampiana avy any ivelany mandritra ny Krizy ara-teo-karena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Marsa 2009 19:43 GMT
Mitohy hatrany ny tatitra eo amin’ny fanampiana any ivelany ho an’I Cambodia na eo aza ny krizy fahobe ara-toe-karena. Mizara vaovao I CAAI News Media fa hanome vola mitentina 21 tapitrisa dollar ho an’I Cambodia i Etazonia mba analefahana ny fahantrana eny ambanivohitry ny firenena mandritra ny 4 taona.
Araka ny tantara izay nalefan’ny Vaovaon’I Cambodia, dia nanome vola mitentina 5,6 tapitrisa dollar I Etazonia ho fanampiana tamin’ny taona 2008.
Mahakasika ny fanampiana avy any ivelany dia nampiditra latsoratra aterineto ny dinidinika avy tamin’nybolongan’I Phonom Penh i Socheata Vong miaraka amin’ny mpanao fitsikerana politika antsoina hoe Lao Mong Hay izay nilaza izao manaraka izao:
“… Raha jerena ifotony ny fanampiana avy any ivelany dia fitsipi-draharaha entin’ny vahiny izany. Jereo fotsiny anie ny governemanta Amerikana. Raha toa ka ny firenena mila fanampiana no mandala ny foto-dalana mifanaraka amin’ny fitsipi-draharam-bahiny Amerikana, dia omeny azy ny fanampiana .
Nampidirin’i Mr. Semoun sy Hort Sroeu ny lahatsoratra momba ny famatsiam-bola Koreana Atsimo mankany Kambodia. Milaza ny blaogin’I Sroeu:
Tamin’ny taona 2007, dia lasa firenena faha-6 mpandray ny famatsiam-bola avy amin’ny Korea Atsimo ao aorian’ny Shina sy Etazonia I Kambodia, ny faritry Hong Kong ao Shina no mamatsy an’I Vietnam sy Malaysia, [ny masoivoho Korea Atsimo ao Kambodia antsoina hoe Shin Hyun-suk] no milaza hoe… tamin’ny voalohany, ny famatsiam-bola avy any Korea Atsimo dia nibahan-toerana tamin’ny sehatra famokarana ara-indostrialy, nanampy ny teniny ihany koa izy fa ny fandraharahana banky, ny orinasa famokara-tsakafo, ny orinasa indostrialy, ny fanatsarana ny fananan-tany sy ny sehatra serasera teknolojia dia ny sehatra itobian’ny famatsiam-bolan’ny Koreana Atsimo ao Kambodia ankehitriny.
Na dia izany aza, dia tokony mitady ny hevitra hisedrana ny fitsitotongananan’ny fanondranana sy ny fanafarana ny firenena. Araka ny tatitra nentin’ny Khmer Young,
Voavinavina fa mifintina ho 0,5 isan-jato ny toe-karenan’I Kambodia amin’ity taona ity, ny Tahirim-Bola Iraisam-pirenena no niteny izany tamin’ny Zoma. Ezaka goavana tokoa ny hari-karena 4,8 isan-jato izay nolazainy IMF mialoha tamin’ny volana Novambra.
Ny filazana entin’ny Tahirim-Bola Iraisam-pirenena dia afaka jerena eto.